မုန့်လေး ကျွေးလိုက်ရုံဖြင့် တောင်တက် ခရီးကို အသွားအပြန် တာဝန်ကျေစွာ ပို့ဆောင် ပေးတတ်တဲ့ ဇွဲကပင် တောင်ခြေက အံ့ဖွယ် ခွေးကလေး – Zartiman
ဇွဲကပင်တောင်တက် ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို လိုက်ပို့ပေး တတ်တဲ့ ကောင်လေးတွေ တောင်ခြေမှာ မုန့်လေး ကျွေးလိုက်ရုံဖြင့် တောင် တက်ခရီးကို အသွားအပြန် ပို့ဆောင်ပေးတတ်ပါတယ်။ လိမ္မာလိုက်တာ..ခွေးလေးရယ် အရင်ဘဝက ဆုတောင်းမှားခဲ့လေး သလား…. လူဖြစ်ခဲ့တယ် တူပါတယ် ခွေးလေးရယ် ဇွဲကပင်တောင် သွားလို့ရသေးလား မေးတဲ့သူတွေ သွားလို့ရပါတယ်။
တက်လို့ ရပါတယ် မပိတ်ပါ ခင်ဗျာ။ ဇွဲကပင်တောင် (အရှေ့ပိုးကရင်: လါင့်ခွဲါက်ၜင်) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကရင်ပြည်နယ် တွင် တည်ရှိသော တောင်ဖြစ်သည်။ ကရင်ပြည်နယ်၏ အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၂၃၇၂ ပေမြင့်ပြီး ဘားအံမြို့၏ တောင် ဘက် ၇ မိုင်ခန့်အကွာ ခလောက်နို့ကျေးရွာ အနီးတွင် တည်ရှိသည်။
ဇွဲကပင်တောင်သို့ တက်ရန်နှင့် ဆင်းရန် အတွက် နေရာ (၂) ခု ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုမှာ ခလောက်နို့ ကျေးရွာဝင်ပေါက်ဖြစ်ပြီး ဘား အံမြို့မှ နေ၍ (၁၅) မိနစ်ခန့် ဆိုင်ကယ် (သို့) ကားဖြင့် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ နောက်တစ်ခုမှာ လုံမဏ္ဏီဥယျာဉ်ဝသင်ပေါက်ဖြစ်ပြီး သံလွင် တံတားနှင့် နီးသောကြောင့် ခရီးသွားများ အများဆုံး တက်ရောက်သော ဝင်ပေါက်ဖြစ်သည်။
မုနျ့လေး ကြှေးလိုကျရုံဖွငျ့ တောငျတကျ ခရီးကို အသှားအပွနျ တာဝနျကစြှော ပို့ဆောငျ ပေးတတျတဲ့ ဇှဲကပငျ တောငျခွကေ အံ့ဖှယျ ခှေးကလေး
ဇှဲကပငျတောငျတကျ ခရီးသှားဧညျ့သညျတှကေို လိုကျပို့ပေး တတျတဲ့ ကောငျလေးတှေ တောငျခွမှော မုနျ့လေး ကြှေးလိုကျရုံဖွငျ့ တောငျ တကျခရီးကို အသှားအပွနျ ပို့ဆောငျပေးတတျပါတယျ။ လိမ်မာလိုကျတာ..ခှေးလေးရယျ အရငျဘဝက ဆုတောငျးမှားခဲ့လေး သလား…. လူဖွဈခဲ့တယျ တူပါတယျ ခှေးလေးရယျ ဇှဲကပငျတောငျ သှားလို့ရသေးလား မေးတဲ့သူတှေ သှားလို့ရပါတယျ။
တကျလို့ ရပါတယျ မပိတျပါ ခငျဗြာ။ ဇှဲကပငျတောငျ (အရှပေို့းကရငျ: လါငျ့ခှဲါကျၜငျ) သညျ မွနျမာနိုငျငံ၊ ကရငျပွညျနယျ တှငျ တညျရှိသော တောငျဖွဈသညျ။ ကရငျပွညျနယျ၏ အမှတျအသားတဈခုဖွဈပွီး ပငျလယျရမေကျြနှာပွငျအထကျ ၂၃၇၂ ပမွေငျ့ပွီး ဘားအံမွို့၏ တောငျ ဘကျ ၇ မိုငျခနျ့အကှာ ခလောကျနို့ကြေးရှာ အနီးတှငျ တညျရှိသညျ။
ဇှဲကပငျတောငျသို့ တကျရနျနှငျ့ ဆငျးရနျ အတှကျ နရော (၂) ခု ရှေးခယျြနိုငျပါသညျ။ တဈခုမှာ ခလောကျနို့ ကြေးရှာဝငျပေါကျဖွဈပွီး ဘား အံမွို့မှ နေ၍ (၁၅) မိနဈခနျ့ ဆိုငျကယျ (သို့) ကားဖွငျ့ သှားရောကျနိုငျပါသညျ။ နောကျတဈခုမှာ လုံမဏ်ဏီဥယြာဉျဝသငျပေါကျဖွဈပွီး သံလှငျ တံတားနှငျ့ နီးသောကွောငျ့ ခရီးသှားမြား အမြားဆုံး တကျရောကျသော ဝငျပေါကျဖွဈသညျ။